Perikopa FJKM alahady 11 Aogositra 2013 | FJKM Amboniloha
Perikopa FJKM alahady 11 Aogositra 2013
II Mpanjaka 19 : 29 – 34
29 Ary izao no ho famantarana ho anao kosa: Hihinana ny maniry ho azy avy tamin’ny voa mihintsana ianareo iray taona, ary amin’ny taona manaraka dia ny kolokolon’izany, fa amin’ny taona fahatelo kosa dia mamafaza ianareo, ka mijinjà, ary manaova tanim-boaloboka, ka mihinàna izay vokatra eo.
30 Ary izay sisa amin’ny taranak’i Joda dia mbola hamaka lalindalina kokoa sady hisondrotra hamoa.
31 Fa hisy sisa hiseho avy any Jerosalema sy sisa afaka avy any an-tendrombohitra Ziona; ny fahasaro-piaron’i Jehovah, Tompon’ny maro, no hanao izany.
32 Koa izao no lazain’i Jehovah ny amin’ny mpanjakan’i Asyria: Tsy ho tafiditra amin’ity tanàna ity izy, na handefa zana-tsipìka ho ato, na hitondra ampinga eo anoloany, na hanandratra tovon-tany hamelezany ity.
33 Ny lalana izay nihaviany ihany no hiverenany, fa tsy ho tafiditra amin’ity tanàna ity izy, hoy Jehovah.
34 Fa hiaro ity tanàna ity Aho ka hamonjy azy noho ny amin’ny tenako sy Davida mpanompoko.
Jaona 16 :16 – 24
17 Ary ny mpianany sasany niresaka hoe: Inona izany nolazainy tamintsika hoe: Vetivety foana dia tsy hahita Ahy ianareo; ary vetivety foana indray dia hahita Ahy ianareo, ary, satria mankany amin’ny Ray Aho?
Filipiana 1 : 27 – 30
27 Fa hany ataoko: aoka ny fitondran-tenanareo ho miendrika ny filazantsaran’i Kristy, mba handrenesako ny toetrareo (na ho tonga aho ka hahita anareo, na tsy ho tonga), fa maharitra amin’ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara,
28 ka tsy ho azon’ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin’inona na amin’inona; fa amin’ireo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjena anareo kosa, sady avy amin’Andriamanitra.
29 Fa ianareo efa nomena noho ny an’i Kristy, tsy ny hino Azy ihany, fa ny hiharam-pahoriana koa noho ny aminy,
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 6 août 2013